Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Contena 2021: Contena ma sharci baa mise waa khiyaano | Sida ay u shaqayso
Contena waa xubin-ku-saleysan qorista freelance madal siisa qalab waxbarasho iyo shaqo raadin. Ujeeddada mareegtu waa inay kaa caawiso sidii aad u heli lahayd hawlo qoraal oo dabacsan oo meel-bannaan ah.
In kasta oo ujeedadu u muuqato mid adag oo ka duwan inta badan, madalkan qorista ee iskii u shaqeysta waa mushaharka qoraaga si loo helo fursado shaqo iyo waxbarasho. Taa beddelkeeda, Contena waxay ballan -qaadday inay kaa caawineyso inaad bilowdo xirfaddaada qorista si aad meel fog ugu shaqeyso shirkadaha sare.
Waxaa jira waxyaabo badan oo halkaas laga furayo waxaanan u maleeyay sida ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo dib -u -eegiddan Contena waxay noqon doontaa in laga helo isticmaaleyaasha faahfaahinta daacadnimada ah ee ku saabsan Contena.
Sida loo diiwaan geliyo Contena
Qaybta koowaad ee habka diiwaangelintu way sahlanayd. Booqasho www.contena.co. Waxaad ku bilowdaa adigoo gujinaya "Codso Ku Biir".
Waxaad si dhakhso leh u ogaan doontaa in Contena ay tahay madal martiqaad kaliya ah, waxaadna u baahan doontaa inaad buuxiso xogwaraysi gaaban oo ku weydiinaya khibradaada qorista iyo waxa aad jeceshahay inaad ka shaqayso.
Tusaale ahaan, qorista maaliyadda shaqsiyeed, wax ka qorista xashiishadda/CBD, u shaqaynta hab -nololeedka ama baloogyada safarka, qorista shirkadaha B2B ama B2C, iyo in ka badan.
Marka xigta, waxaad ka heli doontaa emayl Contena oo ay ku jiraan saddex warbixinood oo sharraxaya wax badan oo ku saabsan hodanka aan ku gartay xog -ururinta. Warbixinnadu waxay bixiyeen dulmar guud kasta, tusaalooyin shaqooyin bannaan iyo mawduucyo niche ah oo ku jira niche. Waxa kale oo jiray tirokoobyo la qori karo oo loogu talagalay niche kasta, oo ay ku jiraan tirada shaqooyinka la heli karo, celceliska mushaharka, iyo mushaharka ugu sarreeya.
Dukumentiga ugu dambeeya ee iimaylka waa Tusaha Sirta Niche ee Qoraalka Contena. Waxay lahayd macluumaad waxtar leh oo sharxaya faa'iidooyinka niches, waxayna waxoogaa ku tilmaamtay istiraatiijiyadda suuqgeynta ee ay baraan qoraayaasha cusub.
Ka dib markaad dib u eegto emayllada dusha saaran, waxaad heli doontaa emayl si aad u hawlgeliso xubinnimadaada oo aad lacag u siiso gelitaanka websaydhka.
Faallooyinka Contena- Waa imisa qiimaha Contena?
Waxay ku kacaysaa $ 497 xubinnimada hal sano ah iyo $ 997 xubinnimada laba sano ee Contena. Waxaa jira dammaanad lacag celin 30 maalmood ah, laakiin waxay ku timaadaa shuruud ah inaad buuxiso waraaqo shaqo oo taxane ah oo muujinaya inaad shaqada qabatay.
Contena waxay kaloo xaq u leedahay inay diido codsiyada lacag -bixinta oo muujinaya "shaqo aan dhammaystirnayn ama dadaal aan ku filnayn".
Halkaas ayaan ku joojiyay. Uma baahni wax caawimaad ah inaan bilaabo meheraddayda qorista ama helitaanka shaqooyinka bannaan. Laakiin sidoo kale wax yar ayaan ka naxay inay tahay inaan maro habka is-qoritaanka ka hor intaanan helin lambarada dhabta ah.
Contena waa degel lacag lagu bixiyo, laakiin halkan waa waxa aad ku bixineyso
Markaad isqorto Mawduuca, waad arki kartaa boosaskooda bannaan, laakiin waxaad dhab ahaantii bixinaysaa helitaanka fasallada qorista iyo/ama tababarayaasha qorista.
Shaqooyinka aad ka hesho Contena aad bay ula mid yihiin kuwa aad ka hesho guddiyada shaqada ee bilaashka ah. Farqiga ayaa ah in Contena ay soo ceshato qoraalada laga helo guddiyada shaqada ee bilaashka ah oo ay ku dhejiso sabuuradda shaqada.
Waxa ka maqan guddiyadan shaqo ee bilaashka ahi waa taageero waxbarasho, taasna waxaad ka helaysaa Contena iyada oo loo marayo Akademiyada Contena. Waa koorsooyin taxane ah oo loogu talagalay inay ku baraan sida loo dhiso meheraddaada qorista xorta ah, oo ay ku jiraan cutubyada:
Dhagax -dhigista meheraddaada qorista
Sida loo sameeyo qaababka qorista
Isku keen faylalkaaga
Sida loo tuuro macaamiisha
Dhis dhuunta aad isticmaali karto si aad u soo jiidato macaamiisha saxda ah
Casharradan dhammaantood waxaa ku jira tababar fiidyow, casharro qoraal ah, iyo agabyo la soo dejisan karo.
Xubnaha Platinum sidoo kale waxay fursad u leeyihiin tababare Contena oo ku siin doona taageero shaqsiyeed oo dheeraad ah.
The Content Job Finder waa guddiga shaqada oo leh isla jagooyin bannaan oo aad ka hesho websaytyada bilaashka ah, laakiin waxoogaa ka habaysan marka loo eego mareegaha xorta ah. Shaqooyinka waxaa lagu kala saaraa warshadaha waxaadna arki kartaa qiimaha shaqada iyo shirkadda shaqada soo dhejisay.
Contena waxay kuu soo dirtaa ogeysiisyo ku qor taleefankaaga marka gelitaan cusub la soo bandhigo. Contena waxay kaloo soo uruurisay keydka hogaaminta ee qorista, liiska shirkadaha shaqaaleysiiya qorayaasha, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan waxa ay sida caadiga ah u bixiyaan maqaal kasta iyo dhererka maqaalka celcelis ahaan. Fikradda ayaa ah inaad kor u qaadi karto qaar ka mid ah shirkadahaas xitaa haddii aysan ahayn.
Faallooyinka Contena: Dhinacyada Wanaagsan
Iyada oo ku saleysan natiijooyinkayaga, Akadeemiyada Contena waa meel fiican oo laga bilaabo qoraa madaxbanaan. Waxaa loogu talagalay in lagu hamiyo qoraayaasha iskood u shaqeysta waxayna ka caawin doontaa inay ku bilaabaan meheradooda qorista madaxbanaan.
Contena waxay leedahay akadeemiyad ku baraysa sida naftaada kor loogu qaado iyo sida loo helo macaamiil badan oo loo noqdo qoraa fiican.
Dhammaan koorsooyinka waxaa ku jira layliyo, casharro fiidyow ah, iyo tusaalooyin.
Taasi waxay tidhi, Ujeeddadeedu maaha inay kaa dhigto qoraa fiican. Kuma jiraan casharo ku saabsan sida wax loogu qoro dhagaystayaashaada ama sida loo qoro hab u horseedi kara (ama soo saari doona natiijooyinka) macmiilkaaga. Waa inaad adigu taas barataa.
Machadka Contena ma yahay koorso wanaagsan?
Waxa aan ka jeclahay koorsada waa qaabeynta macquulka ah. Waxay ku bilaabataa hordhac ka dibna waxay u gudubtaa tallaabooyinka xiga ee soo socda: barashada heshiisyada qorista, dhisidda tusaalooyinka, dhisidda faylalka tacliimeed, abuurista garoonka ugu habboon, iyo soo degidda macaamiisha.
Tababbarka badankiisu wuxuu ku wajahan yahay adeegsiga Contena si uu u helo muuqaalada qorista ee ugu mushaharka badan, soo jiita macaamiisha, hagaajiya qaabka qoraalka, iyo adeegsiga aaladaha madaxa bannaan. Waxaad sidoo kale akhrin kartaa qoraalkan ku saabsan 20 aaladaha wax lagu qoro ee loogu talagalay qorayaasha
Dhexdhexaadinta Contena (rahmad)
Shaki la'aan, tani waa inay noqotaa astaamaha ugu wanaagsan ee Contena. Haddii ay tahay in si togan loo helo qiimeynta Contena, markaa kani waa kan.
Qoraa madaxbannaan, waxaad la kulmi doontaa noocyada kala duwan ee macaamiisha. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay qaadan doonaan shaqooyinkooda waxayna ku baaba'aan duurka. Ma lihid qaab aad ku hesho lacagta aad samaysato.
Taasi waa runta xorta -hayaha.
In kasta oo ay qaadan karto saacado in la baaro oo la qoro maqaal, haddana waxaa jira kuwa diida ama ka fogaada shaqadaada (oo aadan waligaa bixin!).
Dhibaatadan waxaa wax ka qabata Contena. Lacagta lagu leeyahay macmiilka waxaa Contena ku wareejisa koonto qarsoodi ah oo laguu sii daayaa marka labada dhinac ay ku qancaan shaqada la qabtay.
Waxaad diiradda saari kartaa waxa aad sida ugu fiican wax u qabato: qor oo ha ka welwelin in lacag lagu siiyo ama la macaamilka macaamiisha khiyaanada leh ee internetka ah.
Adeegga macmiilka (24/7)
Markaad maalgashanayso madal kugu kacaysa in ka badan $ 100 bishii, ma noolaan kartid taageero macmiil la'aan.
Dhab ahaantii, kuma talinayo inaad iibsato koorso bilaa koox taageero ah. Markaad ku sii socoto koorsada, waxaad u baahan doontaa qof ku caawiya haddii aad ku dhegto.
Contena waxay leedahay taageero macmiil oo wanaagsan manaan maqal wax taban oo ku saabsan dhinacan.
Haddii aad tan akhrinayso oo aad faallo ka bixinayso Contena, fadlan la wadaag khibradaada qaybta faallada.
Waxaan daacad ka ahay dib -u -eegiddan qof kasta oo doonaya inuu maalgashado Contena. Khibradaada ayaa kaliya ku dari doonta qiimo. Markaa faallo hoose ka bixi wixii aad kala kulantay ama ka maqashay Contena.
Scout -ka Contena
Markaad internetka uga shaqayso sidii qof madaxbanaan, waxaad ogtahay sida ay u adag tahay in la helo shaqooyin xafiis guri oo sharci ah. Intarneedka waxaa ka buuxa xayeysiisyo hadhsan iyo khiyaanooyin iyaga oo matalaya shaqooyinka onlaynka ah ee guriga ka yimaada.
Waxaad had iyo jeer dooneysaa inaad ka fogaato khiyaanada iyo indha -indheeyayaasha Contena ayaa kaa caawin doona arrintaas. Waxay hubiyaan in muuqaalada qoran ee sharciga ah kaliya la soo bandhigo.
Kaliya maahan in Contena Scout ay kuu badbaadinayso waqti iyo lacag badan, waxay talaabo hore u qaadaysaa in emayl toos ah laga helo dadka dhajinaya shaqooyinka. Uma baahnid inaad ka welwesho in lagu khiyaameeyo ama dhego la ’.
Haa, inta badan xiriiriyeyaasha waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee bilaashka ah, laakiin faa'iidada tan ayaa ah inay kuu badbaadin doonto waqti oo aad heli karto fursado wanaagsan oo keliya.
Jaaliyadda Contena waa meel aad wax badan ka baran karto oo ku saabsan shaqada iskii u shaqeysta iyo xiriirinta qorayaasha kale ee xirfadlayaasha ah.
Bulshadani waxay si joogto ah kaa caawisaa inaad barato xeeladaha ganacsiga.
Digniinta Contena waxay kuu oggolaaneysaa inaad u dejiso digniino caado u ah shaqada guriga cusub.
Waxaad ka samayn kartaa ogeysiisyo koontadaada oo waxaad heli kartaa iimayl ku saabsan shaqo -guri cusub oo u dhigma shuruudahaaga.
In kasta oo tani aysan ahayn sifo gaar ah oo ay jiraan kumanaan siyaabood oo laguugu soo ogeysiiyo, waad u habayn kartaa adigoon dhib ku qabin barashada siyaabo kale.
Soo gudbinta Contena
Waxay la socotaa boqolaal website -yo iyo shirkado ah oo hadda u furan gudbinta
Faallooyinka Contena- Dib-u-dhaca
Waxay bixisaa astaamo badan marka loo eego cagahooda wax badan:
Waxaa jira tan oo ah ikhtiyaarro kale oo lacag la'aan ah si kasta oo ay bixiyaan. In kasta oo aad waqti ku keydiso Contena, waxaad ku kaydin doontaa lacag aad u badan dookhyo kale oo aad ku maalgelin karto koorso ama hage.
Way adag tahay in la helo Lacag celin:
Aad bay u adag tahay in lacag lagu soo celiyo Contena. Waxaad u baahan tahay inaad caddeyso inaad dhammaysay dhammaan laylisyadii Akadeemiyada Contena.
Xitaa haddii aad dhammaystirto dhammaan laylisyada oo kooxda Contena aysan ku qancin inaysan ku soo celinayn.
Macluumaadkan waxaa laga heli karaa boggooda siyaasadda soo -celinta.
Haddii aad maalgelinayso koorso ama aalad 12 - 24 bilood, waxaad filaysaa inay lahaato “su’aal aan la weydiin siyaasadda soo celinta” ama tijaabo lacag la’aan ah.
Gunaanad- Contena ma khiyaamo baa?
Maya, Contena xaqiiqdii maahan khiyaamo. Waa madal weyn oo loogu talagalay qorayaasha iskood u shaqeysta. Aad bay qaali ugu tahay astaamaha ay bixiso.
Waxaan rajaynayaa in faallooyinkayaga Contena ay waxtar leeyihiin adiguna waad la wadaagi doontaa kuwa kale. Ha iloobin inaad faallo ka bixiso hoosta oo ii sheeg waxa aad ka qabto Contena.
Had iyo jeer waxay u muuqataa mid waxtar leh in la soo koobo dadka aan akhrin karin dib u eegista Contena oo dhan.
Qaybta ugu wanaagsan
Waxaad haysaa qoraallo badan oo tafatiran, tafatirid, iyo muuqaallo baloogyo isku mar ah
Waxay bixiyaan qoraayaasha madaxa -bannaan ee mustaqbalka tababarro iyo tababarro ballaaran
Waxaad samayn kartaa lacag hufan markaad hesho shaqooyin mushahar fiican leh
Xagee Laga Helaa Amaah Soo Celinta Canshuurta 2021 | Meelaha Ugu Fiican
Qeexitaanka Lacag Celinta Caymiska Farqiga: Sida ay u shaqayso 2021
Lacag intee leeg ayaan u baahanahay si aan ugu fariisto Kanada?
Loo -shaqeeyaha cusub, websaydhada ugu fiican ee ay tahay inaad ku biirto si aad u bilowdo kasbashada isla markiiba waa inay noqdaan kuwo madaxbanaan…
Ma ogtahay in lagu siin karo lacag adiga oo ku qoraya faallooyinka Amazon? Haa! Qof kastaa wuu samayn karaa haddii…
Waxaan horey u ognahay in ganacsigaaga yar uu leeyahay kharashyo badan oo lug ah. Waxa aanay u baahnayn waa…
Dhaqdhaqaaqa dhinaca korantada ah macnaheedu maaha inaad si toos ah u dayacayso shaqadaada, waxay ku siinaysaa waddo kale oo aad ku…